Beanbag Chair PDF Nlereanya – The Tailoress
Home / Ngwongwo ndị / ngwá ụlọ / Beanbag Chair PDF Nlereanya
SKU: BeChPDPa Categories: Ngwongwo ndị, ngwá ụlọ Tags: beanbag, oche, ụmụ, ngwá ụlọ, furnshings
Easy peasy beanbag oche pdf ụkpụrụ. Na anọ nha sitere na site extra obere (n'ihi na dị nnọọ obere bums) na nnukwu (maka nkekọrịta!)
Download abịa zuru ezu na-ebi akwụkwọ ntuziaka, full agba nkuzi, akwa akwa ndụmọdụ Ibé akwụkwọ dị ka nke ọma dị ka PDF ụkpụrụ.
Ụkpụrụ abịa dị ka a fullscale copyshop PDF akwụkwọ nke a pụrụ e biri ebi ọ bụla size akwụkwọ iji Adobe Reader ka posta ebipụta. Ọzọkwa dị akpaghasịwo jidesie A4 na US ozi sized peeji nke. The iche iche na peeji nke nwere page nọmba na nrịbama-enyere gị aka mmezi bụla na peeji nke ziri ezi mgbe ebi akwụkwọ.
nnukwu: Copyshop size: 129cm x 196cm / A4 peeji nke: 56 / US Letter: 56 / A0: 6
ọkara: Copyshop size: 100cm x 140cm / A4 Pages: 36 / US Letter: 30 / A0: 2
obere: Copyshop size: 87cm x 110cm / A4 Pages: 20 / US Letter: 25 / A0: 2
XSMALL: Copyshop size: 83cm x 58cm / A4 peeji nke: 15 / US Letter: 15 / A0: 1
[ngosi-posts id =”1961″ post_type =”Nkuzi” include_content =”ezi” fụchie =”div”]